महिला सशक्तिकरण खैं : कहिलेसम्म हत्या, हिंसा र बलात्कार सहने ?
-संगीता पहरी ।
म आज महिला सशक्तिकरण र महिला हिंसा र बलात्कार बारे जानकारी गराउन गईरहेको छु । सुन्दर संसारको सृष्टिकर्ता नारी अर्थात् महिला यो धर्तीको सृष्टि दिने जगत हुन । नेपालको हकमा आधा आकाश पनि भनिन्छ नेपाली महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्ने हो भने नेपाली समुदायमा अर्थात् नेपालमा महिला अहिले यस्तो स्थितिमा रहेका छन कि उनीहरू आफ्नो लागि होईन अरुको लागि बाचि रहेका छन ।
महिला केवल ताली बजाने दर्शनको रुपमा मात्रै सिमित छ । लेख्न त संबिधानमा लेखिएको छ महिला पुरुष बराबर हुन । ३३% महिलालाई सहभागिता र साक्षरता हुनु पर्छ । ७५ % पुरुष साक्षरताको आधारमा ५५% महिला साक्षरता रहेको छ ।
सम्पत्तिको हकमा पनि महिलाको सहभागीता पुरुषको तुलनामा नगण्य नै छ । आर्थिक सामाजिक अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागीता कुरै नगरौ । यसरी विभिन्न कुराहरूमा पछाड़ी रहदा रहदै पनि साक्षरता प्रतिस्पर्धाको तुलनामामा महिलालाई कम अबसर दिईन्छ।
नेपाल महिला राष्ट्रपति भएकै देशमा महिला किन सधैं पछि किनभने यो नेपाल हो यहाँ नराम्रो काम गर्ने लाई तालि बजाईन्छ भने राम्रो काम गर्ने गालि गरिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति,सभामुख बिभिन्न निकायहरूमा महिलाको नेतृत्व देखिएको छ तर नेतृत्व देखिएता पनि महिला शशक्तिकरण भने हुन सकेको छैन। दिन रातै हत्याहिंसा ,बलात्कार बढी रहेको छ । निर्मला जस्ता कयौं बलत्कृत निर्मलाहरुने न्याय पाएका छैनन ।
साना बालिकादेखी ७० वर्षको बुढी आमालाई त बलात्कार गर्ने यो समाजको दुष्ट नागरिक अनि कसरी छन र महिला सुरक्षित ? सर्व प्रथम सन १९०९ फ्रेब्रअरी २८ बाट मनाउन सुरु भएको नारी दिवस अहिले २०२१ मा आईपुग्दा १११औं नारी दिवस मनाउछौ तर नारी दिवस मनाएर मात्रै नारीहरु समस्याबाट मुक्ति हुदैनन् । महिलाहरूले भोग्नु परेको सामाजिक आर्थिक र भौतिक लगायतका पिडाहरुले महिलालाई ग्रसित बनाएको छ। नेपालको ऐन, कानुन संबिधानले पनि महिला सहभागीता ३३% महिला सुनिश्चित प्रावधान राखेको छ ।
२१औं शब्तादीको यो सभ्य समाजलाई महिला हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण बोक्सिको आरोप, दिसापिसाब खुवाउने दाईजोको नाममा कुटपिट गर्ने जस्ता जघन्य अपराधले गर्दा ढुन्ङे युगमा पुर्याएको छ ।
भनिन्छ नि महिला पुरुष एउटै रथका दुई प्राङग्रा हुन । जसको कारण यि दुई बिना शृष्टिको संरचना हुन सक्दैन। महिला पछि पर्नुमा सबभन्दा बढी हात हाम्रै समाजको रहेको छ । ज्यालामा काममा लगाउदा पनि महिलालाई भन्दा पुरुष लाई ५०% बढी ज्याला दिईन्छ श्रम दुबैले एकै गर्नु पर्ने अनि महिलाई किन शोषण ? संख्याको आधार नेपालमा महिला नै बढी छन । पुरुषको तुलनामा अनि हक अधिकारमा किन पछि ? कारण महिला कमजोर भएर बस्नु ,कहिँ सभा गोष्ठी समारोहमा पनि घरका पुरुष
का डरले उपस्तिथि नहुनु हो ।
महिलामा सहनशीलता हेर्ने हो भने पुरुषमा भन्दा कयौं गुणा बढी रहेको छ । महिनावारी को समस्या भोग्नु परेको छ ! आमा बन्नु परेको छ यसरी हेर्दा आमा छोरी बुहारी सम्पुर्ण को महिलाको भुमिका रहेको छ ।
आधा धर्ति नारीले ढाकेको छ। आगामी दिनहरुमा महिला हिंसा बलात्कार अर्थात महिला माथि हुने अन्य भेदभाव हटाउने हो भने अब आउने चुनावमा महिलाई राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री बनाउन सिमित सिट दिएर किन नचुनिने ?
महिला सशक्तिकरणको नाममा देश-विदेशबाट जती नै साक्षात्कार गरे पनि हाम्रो जस्तों पुरुष प्रधान देशमा महिला अधिकार कागजको पानामा लेखिए पनि ब्यवहारमा देखिने कहिले हो ?
संसार उज्यालो बनाउने हो भने महिला सशक्तिकरण गरेर सदाको लागि महिला माथिको दमन अन्त्य र पुरुष प्रधान समाज भन्ने चिन्तन हटाएर समावेशी समाज निर्माणमा जुटाैं ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक